နုပျိုလှပပြီး အေးချမ်းတဲ့ အပြုံး လေး တွေနဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်စရာ ကောင်း နေဆဲဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် – XB Media Myanmar
ဆယ်စုနှစ်တခုတိုင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး ပရိသတ် အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ ယခုအချိန်ထိတိုင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ခိုင်သင်းကြည်က VCD ခေတ်မှ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လူသိများကာ နောက်ပို င်းမှာ တော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုလည်း များစွာရိုက်ကူးခဲ့ရသူပါ။ လတ်တလောမှာလည်း အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ရိုက်ကူးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…..။
ခိုင်သင်းကြည်က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး သူမ အားလပ်တဲ့ အ ချိန်လေးတွေမှာ မိသားစုကို အချိန်ပေးကါ ကုန်ဆုံးစေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို နားလည်ပေးပြီး ကြင်နာမှုတွေ အပြည့်အဝပေးတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ သိတက်လိမ္မာပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ် ။ ခိုင်သင်းကြည်က ကလေးတစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်တာတောင် အလှမပျက်ပဲ ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက် လို နုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
ယနေ့မှာတော့ ခိုင်သင်းကြည်ဟာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ ပုံရိပ် လှလှလေးတွေကို တင်ပေးလါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပြောရက်စရာမရှိတဲ့ သူမရဲ့ ပုံလေး တွေကို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး အချစ်ပိုစေရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်. ။ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှား တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးလိုက်ကြပါအုန်းနော်……
Source & Photo credit -KHINE THIN KYI’s FB page
ဆယ္စုႏွစ္တခုတိုင္ အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး ပရိသတ္ အားေ ပးခ်စ္ခင္မွုကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ အႏုပညာ လွုပ္ရွားမွုေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္.။ ခိုင္သင္းၾကည္က VCD ေခတ္မွ အႏု ပညာေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူသိမ်ားကာ ေနာက္ပို င္းမွာ ေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ ကားေတြကိုလည္း မ်ားစြာရိုက္ကူးခဲ့ရသူပါ။ လတ္တေလာမွာလည္း အႏုပညာရွင္ေ တြနဲ႔အတူ ရိုက္ကူးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္…..။
ခိုင္သင္းၾကည္က အႏုပညာလွုပ္ရွားမွုေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၿပီး သူမ အားလပ္တဲ့ အ ခ်ိန္ေ လးေတြမွာ မိသားစုကို အခ်ိန္ေပးကါ ကုန္ဆုံးေစသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကို နားလည္ေ ပးၿပီး ၾကင္နာမွုေတြ အျပည့္အဝေပးတဲ့ ခင္ပြန္းနဲ႔ သိတက္လိမၼာၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ သ မီးေလးတစ္ေယာက္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးတယ္ ။ ခိုင္သင္းၾကည္က ကေလးတစ္ေ ယာက္ မိခင္ျဖစ္တာေတာင္ အလွမပ်က္ပဲ ဆယ္ေက်ာ္သက္ တစ္ေယာက္ လို ႏုပ်ိဳလွပေန ဆဲျ ဖစ္ပါတယ္ေနာ္…..။
ယေန႔မွာေတာ့ ခိုင္သင္းၾကည္ဟာ သူမရဲ့ လူမွုကြန္ယက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကေန ပုံရိပ္ လွလွေ လးေတြကို တင္ေပးလါတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေျပာရက္စရာမရွိတဲ့ သူမရဲ့ ပုံေလး ေတြကို ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရွုၿပီး အခ်စ္ပိုေစရန္အတြက္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါ တယ္ေနာ္. ။ ခိုင္သင္းၾကည္ရဲ့ ဆက္လက္ေလၽွာက္လွမ္းမယ့္ အႏုပညာလွုပ္ရွား ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြက အားေပးလိုက္ၾကပါအုန္းေနာ္……